Ahoana ny fametrahana Google Translate eo amin'ny barazy? - LifeBytes | LifeBytes
Networks ao amin'ny tambajotra | | tambajotra
Ahoana ny fametrahana ny fandikan-teny Google amin'ny boaty ho an'ny fitaovana? Ilay mpandika teny google dia manana mpampiasa maherin'ny 200 tapitrisa, ary rafitra multilingual maimaimpoana maimaimpoana ahafahanao mandika raki-peo, antontan-taratasy, sary ary, mazava ho azy, pejy.
Raha mahita pejy na vaovao amin'ny teny anglisy na fiteny hafa tsy tapaka ianao ary tsy mihetsika avy hatrany ny mpandika teny, Hatoronay anao ny fomba hananana azy ao amin'ny boaty fanampianao mba hanananao rehefa tianao.
1 Mametraka Google Translate mora foana
1.1 ● Dingana 1.
1.2 ● Dingana 2.
1.3 ● Dingana 3.
1.4 ● Dingana 4.
1.5 ● Dingana 5.
2 Apetraho ho azy ny pejy Google Translate
Mametraka Google Translate mora foana
Ny mpandika teny Google dia manana extension ao amin'ny Chrome Web Store, ary raha te hiditra amin'izany dia tsotra sy feno vato ny fizotrany:
● Dingana 1.
Ao amin'ny pejin'ny Chrome no ahitanao ny sary masina sy ny anaran'ny tranokala Chrome, tsindrio io ary ho hitanao ireo fanitarana maro hita eo amin'ny pejy lehibe.
● Dingana 2.
Mandehana any amin'ny motera fikarohana hita eo amin'ny tontonana ankavia, ary soraty ao ny Google Translate. Aorian'ny fanaovana ny fikarohana dia ho hitanao ny kisary mpandika teny google, kitiho eo.
● Dingana 3.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny pejy Google Translate mankany ambany ianao dia ho afaka hahita sy hamaky ireo fiasa, tsikera, asa ary politika sy ny tsiambaratelo izay atolotry ny fanitarana anao, ary eo an-tampon'ny safidy hanampiana an'i Chrome.
● Dingana 4.
Ny fisafidianana ny safidy Add to Chrome dia hahatonga ny fampidinana fampidinana hanomboka avy hatrany, ary avy eo, dia hahazo fampandrenesana fanamafisana ianao mba hanombohana ny fametrahana ny programa.
● Dingana 5.
Mba hanamafisana fa napetraka soa aman-tsara ny fanitarana mankanesa any amin'ny lahatahiry fanitarana.
Apetraho ho azy ny pejy Google Translate
Aorian'ny fanampianao ny fanitarana amin'ny browser-nao dia ho hitanao ny kisary Google Translate hita eo amin'ny tontonana ambony
Raha tsindrio ny kisary dia ho hitanao izany misy safidy milaza hoe "adikao ny pejy" Ary na dia izany aza no tadiavinay, dia hanome anao hevitra tsara kokoa izahay.
Mandehana mankany amin'ny kisary Google Translate ary tsindrio ny ilany ankavanan'ny totozyRaha vantany vao vitanao ity hetsika ity dia hahita lisitry ny safidy kely ianao, ao anatin'izany ny fikirakirana ny fanitarana, kitiho eo.
Halefa any amin'ny vakizoro vaovao ianao izay misy boaty kely hiseho miaraka amin'ity lohateny manaraka ity: Safidy Chrome Extensions, ary any ianao dia tsy maintsy misafidy ny teninao lehibe (Espaniôla) ary tsindrio ny save.
Raha aorian'ny fanaovana izany dia mankany amin'ny pejy tadiavinao ianao, na inona na inona amin'ny fiteny anglisy, frantsay na sinoa, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary sy ny fisafidianana handika ny pejy, dia amin'ny Espaniôla no hanaovana izany, na mety tsy mila manindry ilay kisary akory ianao, satria hadika ho azy ilay pejy. Toy izany koa, azonao atao ny mamerina ilay lahatsoratra amin'ny fiteniny voalohany.
Tsy misy isalasalana, miaraka amin'ity fanitarana ity dia afaka mandika haingana ianao misy pejy web misy anao amin'ny fiteny tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » tambajotra » Ahoana ny fametrahana ny fandikan-teny Google amin'ny boaty ho an'ny fitaovana?
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana Adblock?
Ahoana ny fomba hanampiana fanitarana amin'ny Google Chrome?